Rastrabani.com | ओली-दाहाल ४५ मिनेटसम्म 'वान टु वान' वार्ता, के भयो खास कुराे ? - Rastrabani.com ओली-दाहाल ४५ मिनेटसम्म 'वान टु वान' वार्ता, के भयो खास कुराे ? - Rastrabani.com
ओली-दाहाल ४५ मिनेटसम्म ‘वान टु वान’ वार्ता, के भयो खास कुराे ?
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच आइतबार एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको छ।
पार्टी एकता र शक्ति बाँडफाँडमा समस्या देखिरहेकै बेला दुई नेताबीच शनिबार बिहान भेटवार्ता भएको हो ।
यस अघि सहमति नजिक पुगेको दावी गरेका यी दुई दलबीच सरकार गठन भएकै दिन भने विवाद देखिएको थियो ।
करिब ४५ मिनेट भएकोे वान टु वान वार्तामा पार्टी एकतामा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीका प्रैस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार दुई शीर्ष नेताबीच करिव ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो।
एकताको टुंगो नलागेसम्म माओवादीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरे पनि सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेको छ। माओवादी सरकारमा नगएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका दुई नेतालाई मन्त्रीमण्डलमा राखेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।